अख्तियार भूस : कित्ता काटको दुई लाख घुस ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
अख्तियार भूस : कित्ता काटको दुई लाख घुस !
प्रकाशित मिति २५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १४:०० लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं। राज्यले भ्रष्टाचारका विरुद्ध जतिसुकै निकाय स्थापना गरी कडाई गरेपनि यो निरन्तर प्रक्रियाका रुपमा चलिरहेको छ । अत्यधिक जनसम्पर्क हुने नापी र मालपोत कार्यालयहरु भ्रष्टाचारका अखडाका रुपमा रहेकै छन् । नापी कार्यालय मनमैंजूका प्रमुख ध्रुव थापा उपत्यकाका कहलिएका नापीका डन हुन् । सेवाग्राहीसंग उनी आफैंले र अधिकांश असुलीका कामहरु सर्भेक्षकद्वय अरुणकुमार खड्का र हरि तिवारीमार्फत गर्दैआएका छन् । १२ वर्षअघि अमिनबाट सेवा शुरु गरेका खड्का स्थानीय हुन् र हाल गोंगबु बसपार्क नजिकै बंगला बनाइरहेको स्रोत बताउछ ।
मनमैंजुकै एक कर्मचारी खड्का र तिवारीको नाम लिंदै भन्छन् यी दुवैजना बिहानैदेखि खसीबजारमा भेला भई दिनभर कति पैसा कसरी उठाउने भनी योजना बनाउ“छन् र प्रमुख ध्रुव थापालाई समेत सहभागी गराएर असुली धन्दा चलाउँछन् । नियम मिचेर खड्का ३ वर्षदेखि मनमैंजूमा छन् । यिनी अमेरिका, दुबई, अष्ट्रेलियालगायत दर्जनभन्दा बढी देशमा घुमी पनि सकेका छन् । यो सबै रकम उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका नाममा नापीमा आउने सर्वसाधारणलाई दुःख दिएर असुल गर्ने गरेका नापीकै एक अधिकृत बताउँछन् । यसैगरी तिवारी अख्तियारको फन्दामा परी अनेक शक्तिको प्रभावमा भर्खरै छुटकारा पाएका कर्मचारी हुन् ।
मनमैंजु नापी प्रमुख थापाले भने सरकारले रोकेको कित्ताकाट गरी प्रतिकित्ता १ लाखसम्म असुल्ने गरेको पीडितहरुको गुनासो छ । उनले धर्मस्थलीतिरका जग्गा व्यवसायीलाई ३ आनाको एक घडेरी दिनेभए सबै काम गरिदिन्छु भनी प्रस्ताव राखेका एक व्यवसायीले बताए । थापाले हालै अनुपम फुडल्याण्डमा २० लाखभन्दा बढी खर्चिएर छोरीको बीहेको पार्टी दिएका छन् । यत्रो पैसा मासिक ३५÷४० हजार वैध आम्दानी हुने कर्मचारीले घुस नअसुली कसरी गर्न सक्छ ?
यसैगरी टोखा नापीप्रमुख बेचन यादवले पनि रोकिएको कित्ताकाटलाई कमाउने माध्यम बनाएका छन् । उनी आफैं अग्रसर नभई सर्भेक्षक अशोक खरेललाई लगाएर कित्ताकाटको प्रति कित्ताकाट २ लाखसम्म असुल्ने धन्दा चलाइरहेका छन् । अशोक यस्ता चतुर खेलाडी हुन् कि उनी कार्यालय आउँदा थोत्रो मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन् र घरमा भने तरकारी किन्न समेत करीब आधा करोड पर्ने गाडी रचढ्ने गर्छन् ।
नापीमा आउने सेवाग्राहीलाई अनेक अप्ठेरा देखाएर कामचाहिं गरिदिन्छु तर यति चाहिन्छ भनी उल्टै गुन लगाएको देखाएर अरुभन्दा बढी असुल्न सिपालु खरेलले दैनिक उठाउने रकम नै अपत्यारिलो हुने उनी निकट कर्मचारी बताउँछन् ।
टोखाका खरेल र मनमैंजुका खड्काले जे भन्यो त्यही मान्ने प्रमुख बेचन र ध्रुबहरुको ताल देखेर कर्मचारीहरु भन्छन् यहाँ कुकुरले पुच्छर होइन पुच्छरले कुकुर हल्लाउने अवस्था छ ।
भोलिबाट बागमतीमा मोटरबोट चल्ने
हेटौंडा । बागमती नदीमा व्यावसायिक रुपमा मोटरबोट सञ्चालन हुने भएको छ । सर्लाही र रौतहटलाई मकवानपुर र सिन्धुलीसँग जोड्ने…
पेरुको सामुद्रिक क्षेत्रकाे भूकम्पले दुईको मृत्यु, १७ जना पुरिएको आशंका
पेरू । पेरुको सामुद्रिक क्षेत्रमा आइतबार गएको भूकम्पमा परी दुईजनाको मृत्यु भएको…
गाडी व्यवसायीलाई साथ दिदै पेट्रोलियम डिलर्सले देशभर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री ठप्प गर्ने
काठमाडौं । सिन्डिकेट गर्न पाउनुपर्ने भन्दै देशभर यातायात ठप्प पार्न लागेका यातायात व्यवसायीलाई पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसियनले पनि साथ…
काठमाडौं । सरकारले आफैंले घोषणा गरेको मितव्ययी नीतिविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी सबैलाई यसै महिनादेखि…
काठमाडौं । टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने पक्राउको विषयलाई लिएर काठमाडौं प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीविरुद्ध गालीगलौज गरेको आरोपमा एक…
बाँकेमा कांग्रेसको आन्दोलन जारी
बाँके — नेपाली कांग्रेस बाँके सभापति किरण कोइरालामाथि कुटपीट गरिएको घटनालाई लिएर यहाँ निरन्तर विरोध प्रर्दशन भएको छ ।…